I-HTC yazisa ngokusungulwa kwayo okokuqala kulo nyaka | I-Androidsis
I-HTC ibhengeza ifowuni yayo yokuqala kulo nyaka
UEder Ferreño | | nokuVavanyelwa, Iiselfowuni
I-HTC ihamba kwimeko embi, engaphuculiyo nokungasebenzi kwenkampani. Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka Khange baveze nayiphi na ifowuni ngokusemthethweni. Ngelixa kukho amarhe kunye nokuvuza malunga nezixhobo ezinokwenzeka eziya kuphehlelelwa uphawu, ezinje nge phakathi kuluhlu okanye Inguqulelo entsha yefowuni yakho ye-blockchain. Okokugqibela, ifowuni yayo yokuqala ye-2019 sele ibhengeziwe.
Uhlobo sele lubhengeze ngokusemthethweni. Nangona le fowuni yokuqala i-HTC izakusishiya ngo-2019 mhlawumbi iyadanisa abasebenzisi abaninzi. Ukusukela uphawu iya kuphehlelela ingxelo ebiza ixabiso eliphantsi kwifowuni yayo ye-blockchain. Ukwenza kucace ukuzibophelela kwayo kolu hlobo lwefowuni.
Kunyaka ophelileyo iEksodus yenziwa ngokusemthethweni, ifowuni yokuqala yebhloko ukusuka kwimarike kwaye kuqala kwi-HTC. Inkampani ibonakala yanelisekile ziziphumo ezifunyenweyo, kuba ngoku babhengeza ingxelo yayo ngexabiso eliphantsi. Le modeli intsha iza kuphehlelelwa phantsi kwegama iEksodus 1s.
Yinguqulelo ethi izakwaziswa ngexabiso eliphakathi kwama-250 nama-300 eedola zexabiso. Isiqingatha sexabiso semodeli yoqobo, enexabiso malunga ne- $ 699, kwaye oko sele kunokuthengwa ngemali yokwenyani kwezinye iimarike. Asazi ukuba le modeli intsha inokuthengwa kuphela ngeBitcoin okanye ukuba ingathengwa ngemali yokwenyani.
Le Htodus 1s entsha yeHTC iya kuba nezinto ezininzi ezifanayo kwimodeli yonyaka ophelileyo. Kule meko kuphela inguqulelo efikeleleka ngakumbi ngokwexabiso. Nangona kulindeleke ukuba Ukucaciswa kwakho kuya kuba lula. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho zinkcukacha malunga noku.
Kuqinisekisiwe ukuba le fowuni iza kufika kungekudala. Nangona kude kube ngoku asinayo idatha kwinkcazo, amaxabiso okanye umhla wokukhutshwa kwale HTC 1s. Inkampani ivakalise ukuba kuyakubakho idatha ngaphezulu kungekudala, kodwa khange bathethe nokuba yeyiphi. Ke sinethemba lokwazi ngakumbi kwezi veki zizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-HTC ibhengeza ifowuni yayo yokuqala kulo nyaka
UXiaomi ulungiselela inguqulelo yeprimiyamu yeXiaomi Mi 9: enomzimba owenziwe ngegolide engama-24 yegolide!